महिलाको स्तन समातेर भविष्य हेर्ने ज्योतिष ! (भिडियोसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
महिलाको स्तन समातेर भविष्य हेर्ने ज्योतिष ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । हाम्रो देश प्राचिन कालदेखि नै अन्धविश्वास र आडम्बरीले जबडिएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसहरु सामाजिक अन्धविश्वासमा नै अल्झिरहेका छन् । आफ्नो भविष्य कस्तो होला, के होला भनेर कतिपय मानिसहरु भविष्यव्यक्तामाथि पूर्णतया निर्भर बन्ने गरेका छन् ।
ज्योतिषहरुको पनि आ–आफ्नै हात हेर्ने तरिका रहेको पाइन्छ । हालै हाम्रो देशको छिमेकी मुलुक चीनका एक ज्योतिषीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनी महिलाहरुको स्तन मुसारेर जन्म कुण्डली हेर्ने गर्छन् ।उनको जन्म कुण्डली हेर्ने यस्तो तरिकाले दुनियाँलाई नै चकित पारेको छ । यी ज्योतिषीले युवतीहरुको स्तनमा हात राखेर उनीहरुको भविष्य बताउने गर्छन् । आफ्नो भविष्य हेर्नलाई महिलाहरु पनि घण्टौँ लामो लाईनमा बस्ने गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: ज्योतिष, महिला, स्तन